के गर्ने त यो फुर्सदको समयमा ? – Hamrosandesh.com
के गर्ने त यो फुर्सदको समयमा ?
रोशनी पाठक –
कोभिड १९ का कारणले गर्दा हामी जस्ता विद्यार्थीहरु अहिले चपेटोमा परेका छौँ । सबै कार्यालयहरुले आफ्नो काम सञ्चालन गर्न थाली सकेका छन् तर विद्यालय , कलेज तथा विश्वविद्यालय कहिले खुल्ने हो अझै पत्तो छैन । संक्रमण हुनेको दर घटेसँगै शिक्षण संस्थाहरु खुल्लान् कि भन्ने आशा राखेका हामीहरु फेरी संक्रमितको सङ्ख्या बढे पछि अन्योलमा परेका छौँ । प्रत्यक्ष रुपमा नपढेको पनि पाँच महिना पुगिसक्यो । हामी कतिपयको त पढ्ने बानी पनि हराइसक्यो होला । “दिनदिनै मोबाइल चलायो, खायो , सुत्यो ” कसैलाई कसरी दिन काटिरहेको छस् भनेर सोधदा प्रायः यही उत्तर आउँछ तर यो फुर्सदको समयलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त यो बारेमा हामीले सोच्नै पर्छ।
अहिले यत्तिका महिना बिदा भइसक्दा किताबै नछुने पनि छन् । पछि शिक्षण संस्था खुलेपछि पढ्ने बानी हराइसकेका कारण हामीलाई पढ्न अफ्ठ्यारो पर्न सक्छ । मोबाईलमा पब्जी , फ्री फाएर जस्ता अनलाइन गेम खेल्दै , युटुबमा भिडियो हेर्दै र सामाजिक संजालहरु जस्तै फेसबुक , मेसेन्जर , भाइबर , इमो , आदिमा चिटच्याट गर्दै हाम्रो दिनहरु गइरहेका छन् । तर त्यही मोबाइल प्रयोग गरेर हामी केही नयाँ कुरा सिक्न सक्छौं । ईन्टरनेटको पहुँच हुनेहरुले अनावश्यक कुरामा समय खेर फाल्नु भन्दा गुगल तथा युटुबमा आफूले चाहेको बिषयमा खोजी गर्न सक्छन् र सिक्न सक्छन् ।
गुगल र युटुब मात्रै हैन आफूलाई फाइदा हुने गरी दिन बिताउने धेरै उपायहरु छन् । आफ्नो रूचि अनुरुप कसैले कला , कसैले संगीत , कसैले साहित्यतिर समय खर्च गर्ने हो भने पनि दिन सजिलै जान्छ अनि हामीलाई फाइदा समेत हुन्छ । यसका निम्ति शिक्षकनै आवश्यक पर्छ भन्ने छैन ईन्टरनेटमा खोजी गर्ने हो भने सजिलै भेटिन्छन् । यस्तै दिनदिनै भान्सामा नयाँनयाँ रेसिपीहरु बनाउने अनि घरायसी काममा आफ्ना अभिभावकलाई सहयोग गर्न सकिन्छ । आफूसँग बचेको केही समय घरमा बषौँदेखि थन्किएका पुराना पुस्तकहरु पढ्ने गरौँ । जसले गर्दा हाम्रो पढ्ने बानी हराउँदैन । त्यस्तै ई- लाइब्रेरीबाट पनि मन पर्ने विषय पढ्न सकिन्छ । घरमा दाजुभाइ , दिदिबहिनीसँगै खेल्ने अनि जोक , चुट्किलाहरु सुनाउने गरौँ । जसबाट अलिकति भए पनि राहत हुन्छ ।
कतिपय विद्यार्थीहरु अहिले कोठाभित्र गुम्सिएर बस्नु परिरहेको छ । हरेक दैनिकी उस्तै खालको हुँदा उनिहरु दिक्क भइरहेका छन् । रिफ्रेस हुन नपाउँदा उनिहरु डिप्रेसनको सिकार पनि हुन सक्छन्। त्यसैले यस विषयलाई गम्भीर रुपमा लिन जरुरी छ । खाली समय छ, लकडाउन खुल्यो भनेर साथीहरु भेट्ने , रमाइलो गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन बरु साथीहरुसँग घरमै बसेर कुराकानी गर्ने गरौँ । फ्रेस हुन पाइएन भनेर घुम्न नगैकन घरको छत, आँगनतिर डुल्ने गरौँ । विहान बेलुकी व्यायाम गर्ने गरौँ । आफ्नो स्वास्थको पनि ख्याल गरौँ । केहि समयपछि कोरोना भाइरसको रोकथाम होला भनेर सकारात्मक सोच राख्ने गरौँ जसले गर्दा मानसिक चिन्ताबाट टाढा बस्न सकिन्छ । स्वस्थ रहौँ , व्यस्त रहौँ र खुसी बसौँ ; कोभिड पछि पुरानै अवस्थामा फर्कने तयारी गरौँ ।